သပိတ်မှောက်ကြပါစို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » သပိတ်မှောက်ကြပါစို့
Posted by naung on Jan 31, 2012 in Society & Lifestyle | 31 comments
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ကြောက်မသွားကြပါနဲ့၊ နိုင်ငံတော်ကို ပုန်ကန်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကို တည်ဆောက် နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်ချက်တွေကို တောင်းခံနိုင်ဖို့ အတွက် လွတ်လပ်စွာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ဖော်ထုတ်တင်ပြသင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံကိစ္စ၊ ထားဝယ်ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ ကြသလို၊ အခု ၅၀၀၀ တန်ဖုန်းကိစ္စမှာလည်း ညီညွတ်သင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
၅၀၀၀ တန်ဖုန်းကို မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး MPT ကပြောနေပေမယ့် ရွှေပြည်တံခွန်ကတော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ၁၅သိန်း၊ ၅သိန်း၊ အခု ၃သိန်း တောင် ရင်းနှီးပြီးမှ ဆက်သွယ်မှုအပြင်ကို ရောက်နေတာထက်စာရင် ၅၀၀၀ကျပ်လောက်တော့ ရင်းနှီးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတဲ့ MPT ပြည်သူတွေက ၀ိုင်းဝန်းပြီ သပိတ်မှောက်ကြပါစို့။
Wikipedia တောင် သပိတ်မှောက်သေးတာဘဲ။ အကျိုးသက်ရောက်၊ မသက်ရောက်တော့ မသိဘူးလေ။
လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ MPT ဖုန်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး မပြောဖို့၊ နောက်ထပ်ထုတ်မယ့် ၃သိန်းတန်ဖုန်းတွေကိုလည်း အတတ်နိုင် ဆုံး ၀ယ်မသုံးဖို့ ကို social network တွေကနေ လှုံဆော်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကလည်း သမ္မတကြီးဆီကို တင်ပြမလို့ လက်မှတ်ထိုး စုနေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်။ အဲဒီလို့ စုနေတဲ့ သူတွေကိုလည်း facebook လိုနေရာမျိုးကနေပြီး လှုံဆော်ဆောင်ရွက်ရင် ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး MPT ကို သပိတ်မှောက်ကြပါစို့လို့……………………။
ကောင်းတယ်ဗျာ ထောက်ခံလိုက်ပါတယ် ပေးချင်ရင်ပေးလို့ရနိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်
ထူးကဲတဲ့ အခွင့်အရေးကြီးပါ ။ ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်နေပီး စီးပွါးရေးလုပ်စားနေကြတဲ့ MPT
လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျားတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဂုတ်သွေး စုတ်ယူစားသုံးနေကြတာတွေ
ရပ်သင့်ဖို့ အချိန်တန်နေပါပီ ၊ ၅၀၀၀ တန် ဖုန်း အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ရင် သူတို့အတွက်
ဘာမှ မရတော့မှာ စိုးတဲ့အတွက် ငြင်းဆန် နေတာ မဟုတ်ပါလားဗျာ ။
ငါတို့ က ကိုဘပု ( စာပေစိစစ်ရုံကိုချီးထုပ်နဲ့ ပေါက်တဲ့လူ ) ကို ဆက်သွယ်ပြီး
MPT ရုံးကို ချီးပုံးနဲ့ ထုဖို့ တာဝန်ယူမယ်
အေလဘေးတွေ နံဖို့ သာပြင်ထား
အဂ္ဂမဟာ ဖေ့စဘုတ်တော် ကြီးမှာတော့
MPT ကို တခြားအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပီးတော့ …
Myanmar Prosti***e Team ဆိုလား …အဟဲ စာလုံးပေါင်း တယ်မေ့ …
ခုနေရှဲရင်တော့ Like ဆယ်ဂဏန်းလောက်တော့ ရဦးမယ်ထင့် …
နှာကိုယ်တော်ရေ Myanmar prostitute team လို့ ပေါ့။ဟီး မိုက်တယ်ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ခုတော့ အကျိုးတူပူးပေါင်းမယ် ဘာညာ ကြားနေရတယ်ဗျ။
အမတ်မင်းပြောတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျက MPT ကနေလာတာမှာ စာလုံးပေါင်းတွေ
မှားနေလို့ဖေ့စ်ဘွခ်မှာ ဆော်နေကြပီလေ။
MPT ကို မီးဒုတ်..မီးဒုတ်
ပာားပာား ကျုပ်ကလဲမှောက်ချင်နေတာ အဲ့အစုတ်ပလုပ် MPT ကို လုပ်လိုက်လေဗျာကြာလားလို့gazetteကနေလဲ မဲထည့်လို၇ကောင်းသား
5000 တန် ဖုံးသာ တကယ် ပေါ်လာ လို့ က တော့၊ ၃ ~ ၄ သိန်း တောင်းပြီး ခန့် ထားတဲ့ လမ်းဘေးဖုန်း ၀န်ထမ်းတွေ ကို MPT ဘယ်နေရာ မှာ ပြန်ခန့် မလဲ မသိဘူးနော်။
တစ်ချိန်က တယ်လီဖုန်း သွားလျောက်ရင် သုံးတတ်ရဲ့လား အကြည့်နဲ့ လျောက်လွှာထားချင်ထားခဲ့လေလို့ အပြောခံခဲ့ရပါတယ်
ဖုံး ရတဲ့အကြောင်းကြားစာ က စာတိုက်မှုးလက်ထဲမှာ ရမှန်းသိတော့လဲ ငွေ ၃.၄ထောင်ချပေးရ sim card သွားထုတ်တော့လဲ
ဟို တစ်ထောင် ဒီတစ်ထောင်နဲ့ မြန်အောင်လုပ်ရ ကာယကံရှင်ရဲ့ ကိုယ်အာရုံရတဲ့ နံပါတ်ရ ရေးပေးရတဲ့ငွေယူရနဲ့ သိန်းပေါင်းများစွာ ရဘူးတဲ့ ဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အထက်ကလူတွေရဲ့ ၀င်ငွေဘဲလေ ဘယ်လိုလုပ် ၅၀၀၀နဲ့လုပ်စေချင်ပါ့မလဲ
တစ်နေ့တစ်ခါ စားစရာလာပို့သူကို နောက်နေ့မပို့ပါနဲ့  လို့ ဘယ်သူကပြောမှာလဲနော်
ခဏ စိတ်လျော့ထားပါအုံး ဆက်သွယ်ရေးက လူမှုဆက်သွယ်ရေးမှာ အရေးကြီးပါတယ် သာရေးနာရေး တွေမိသားစုတိုင်းရှိတယ်
၃ သိန်းဖုန်းတွေ မ၀ယ်ဘဲ သပိတ်မှောက်ကြဗျာ
လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ MPT ဖုန်းတွေကို မသုံးဘဲ
သပိတ်မှောက်လို့တော့ ဖြစ်တေးဝူး.. အဟီး
အိမ်ရှင်မနဲ့ အဝေးမှာဆို ဒီပေါ်ကပဲ ကျူစရာရှိတာကိုး..
ဘာလုပ်လုပ်ပေ့ါကွယ် ၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလက်အောက်ခံ ဝန်ထမ်းများနဲ့ တော့ မဆိုင်ကြောင်း ပြောပါရစေကွယ် ။
5000 နဲ့ရောင်းပေးမယ့်သူက ရောင်းပေးမယ်၊ သုံးလို့ရမှာပါတယ်ဆိုတာတောင် မဆရက မဟုတ်ပြန်ဘူး၊
sim card ကိုအလကားပေမယ်ဆိုရင်တောင် မဆရမှာ သုံးစွဲလို့ဒါဏ်ကြေးပေးနေရမလားမသိဘူး။
သပိတ်မှောက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ လူမှုရေး စီးပွားရေး အတွက် ဖုန်းဆိုတာ ဆက်သွယ်ရေးမှာ အဓိက အရေးပါတယ်။ သာရေး နာရေးက အစ ဈေးအတက်အကျ စတာတွေက ဖုန်း အသုံးပြုခြင်းကြောင့် များစွာ တွင်ကျယ်လာပြီးတော့ မရှိတဲ့ လူထက် ရှိတဲ့ လူက သတင်းဦးနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီလို သပိတ်မှောက်ရင် ကိုယ့်ခြေထောက် ကိုယ်ဖြတ်သလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။ မမှောက်နိုင်ဘူး မလိုအပ်တော့ မပြောပါဘူး။
ဂလိုမျီုးမက်ဆေ့ခ်ျ လေး MPT ကနေ၀င်လာပါတယ်ဗျ..
ှုIf you use GSM repeater without licence,remove innmdiately.
Omitting shall dealt with according to law. (MCPT)
* immediately ပါ..
တော်လိုက်တဲ့ ဖွားဆူး..ဒါကြောင့်လဲ ရွာမှာထင်ပေါ်ပေတာဘဲ…
ဆယ့်ငါးသိန်း ကိုလဲ မှောက်တယ် ငါးသိန်းကိုလဲ မှောက်တယ် သုံးသိန်းမပြည့်တပြည့် ကိုလဲ မှောက်တယ်
တစ်လုံးမှမ၀ယ်နိုင်လို့နောက်ဆုံး လမ်းဘေးဖုန်းတောင်မှ အလကားမဆက်ဘူး ပိုက်ဆံကုန်မှာ စိုးလို့ 
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်း တွေကလဲ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးမဟုတ်တောင်မှ နေရာကောင်း
မှာရှိနေပါတယ် သူတို့ ကို အထိမနာစေချင်ပေမယ့် နောက်ထပ် အဲ့လို.မလုပ်ရဲအောင်တော့ ဆုံးမချင်တာဗျ
ကွန်နရှင် မကောင်းတာနဲ့ တင် တော်တော်တင်းနေတာ
အမလေးလိုချင်တိုင်းသာ သပိတ်မှောက်လို့ကတော့ သမ္မတကြီး ဦးနှောက်ခြောက်ပြီး ဆံပင်တွေတောင်ဖြူကုန်တော့မယ်
Credit to _http://doctorsatephwar.blogspot.com/2012/01/blog-post_14.html?spref=fb
ထောက်ခံတယ်။ကျွန်တော်လဲMPT ADSL ယူထားတာသုးံလို.မရတာခပ်များများပဲ။
အခုတော.လိုင်းပါပိတ်မလိုက်ပီ။ADSL connection မရရင်သူတို.ဆီက MPT ၀န်ထမ်းခေါ်ရင်
တေဇ ထွန်းမြင်.နိင် ကြံဖွတ်၁၂%အမြတ်ရတယ်။
အကောင်းဆုံးအကြံပြုလိုက်မယ်။ဆက်သွယ်ရေးကဘဲ250000နဲ့ ရောင်းမယ့်အစား
5000နဲ့ ရောင်း။ ကုန်ကျငွေက3နှစ်နဲ့ ကြေမှာလေ။
““။ဒေါ်လာ ပြန်ယူမည်ဆိုလျှင်မဖြစ်နိုင်ပါ ၊ဒေါ်လာ ပြန်မယူဘူး ဆိုလျှင် ဖြစ်နိုင်ပါမည် ။””
3 နှစ်နဲ့ ကြေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြည်သူတွေကိုကျခံစေမှာလား။ စိုက်ထုတ်ရင်းနှီးမှာလား
အဲ့သည် ၅၀၀၀ ကုမ္ပဏီကို ဘယ်လောက်ခင်ဗျားတို့ ထောက်ခံသလဲဆိုတာလေးပါ
အနီးပြောပြော အဝေးပြောပြော ဒီဖုန်းပဲ သုံးပြီးပြောနေရတာဆိုတော့ … ဖုန်းမသုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ သိပ်အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး … ။ မလိုအပ်ပဲ ဖုန်း မသုံးနဲ့လို့ပြောရမယ် … ။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုလျှင် ဖုန်းဆင်မကဘူး … စာပို့စနစ်တွေ အင်တာနက်တွေလည်း ပါတယ်လေ ..ဒီတော့ .. အင်တာနက်လည်း မသုံးကြပါနဲ့ ဗျို့ …
ငါးထောင်တန်ဖုန်းသာ ပြောနေကြတာ … အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ တကယ်ရှိမရှိဆိုတာ … (မမြင်တွေ့သေးလို့ ) မယုံကြည်သေးပါဘူး … ။ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လို အင်တာဗျူးတယ်ပဲပြောပြော … အင်တာနက်ထဲက … ပေါက်ကရဇာတ်လမ်းတွေက များသမို့ … ယုံရခက်နေပါတယ် … ။
ငါးတောင်တန်ဖုန်း ကုမ္ပဏီ တကယ်ရှိတယ် ထားဦးတော့ … ဟမ်းဆက်ဘယ်လို အမျိုးစားသုံးလို့ရမလဲ ရေးမထားဘူး … ။ ကဒ်ကတော့ ငါးထောင် … ဟမ်းဆက်က သိန်းနဲ့ ချည်ဆိုလျှင် ..ဘာထူးတော့မလဲနော်
ခင်ဗျားတို့ မှောက် မှောက် ၊ မ မှောက် မှောက် ၊ MPT ကတော့ ခင်ဗျားတို့ ဖုန်းတွေ ဆက်မရ ခေါ်မရ အောင် အင်တာနက်လိုင်းတွေ ကွန်နရှင် မရ အောင် သပိတ်မှောက်လိုက်ပါပြီ ။ ခစ်ခစ်…
ကြိုတင်ငွေပြည်.ကဒ်ပါ သပိတ်မှောက်ကြ မလား ။ ခစ်ခစ်… ခစ်ခစ်… ခစ်ခစ်…
ခံစားချက်မျိုးရှိနေကြလို့ တော်တော်တင်းနေတာ ပါ။ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ ပြောခဲ့တယ်” သည်းခံ ” တဲ့ …..
အာ ချောင် says:
အခုMPT ကွန်နက်ရှင်ကိုဖြတ်ပြီးမှသွားဖို့ ဥပဒေပြဌာန်းထားတာက ပြောသမျှဖုန်းလိုင်းအားလုံးကို သူတို့ကချုပ်ကိုင်ထားချင်လို့ပဲ ။ နိုင်ငံရေး၊စီးပွါးရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဆက်သွယ်ရေးကအဓိကလေ
အဲ့ဒီတော့ ရွှေပြည်တံခွန်ပြောသလို သူ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်နဲ့သူပေးလုပ်လိုက်ရင် အကုန်လုံး လွတ်လပ်စွာပြောလို့ရပြီး ဘယ်သူတွေနိုင်ငံရေးဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲ သူတို့ မသိနိုင်(ခိုးနားထောင်လို့မရ) တော့ဘူး၊ ဖြတ်ချချင်တိုင်းလဲဖြတ်ချလို့ရတော့ဘူး တဲ့
ကျုပ်ကတော့ မှောက်တာမကြိုက်လို့ လှန်ထားလိုက်ပြီ
ိဒီနေ့ မြန်မာတိုင်းမ်ထဲမှာ ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ရှိသူပြောထားတာ ဥပဒေ အရ လုပ်လို့မရလို့ပါ ဆိုတာရယ်၊ ဆင်းကဒ်ကို ၅၀၀၀ ကျပ် နဲ့တောင်မဟုတ်ဘူး .. အလကား ပေးမဲ့ proposal တင်ထားတဲ့ ကုမ္မဏီတွေ တောင် ရှိတယ်ဆိုပြီး ပါလာတော့ ..
သူကြီးရေ .. သူကြီးပြောတဲ့ အင်ဖြူဆာရ်ချာကြီး တို့ တက္ကနီကယ်တို့ ကို မေ့ထားလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပဒေ ပြန်ဆွဲပြီးရင် ပရိုက်ဗိတ်တွေ လုပ်ခွင့်တွေ ပြု သွားမယ်လို့ လဲဆိုထားပါတယ် ဆိုတော့………
ရောင်းမဲ့ နှစ်သိန်းခွဲတန်တွေတော့ သပိတ်မှောက်မှောက် မမှောက်မှောက် မ၀ယ်ယူသင့် သေး ပါဘူး .. နောက် လေးငါးလလောက်စောင့်ကြည့်သင့်တယ်ထင်တာဘဲ….